Itoophiyaatti Tajaajila Interneetii Argachuuf Namni Tokko Galii Isaa Dhibba Irraa Harka Diigdama Baasuu Qaba: Qorannoo
Itiyoophiyaa keessatti tajaajila interneetii argachuuf baasiin baasan baay’ee mi’aa ta’uu, qorannaan geggeessame tokko beeksisee jira. “Alliance for Affordable Internet” ka jedhamu, dhaabbatni sadarkaa Addunyaa, biyyoota galii giddu-galaa fi gad-aanaa qaban 58 keessa gatii tajaajila interneetii jiru wal-dorgomsiisuudhaan, Itiyoophiyaa lakkoobsa shantamii shanaffaa irra kaa’e.
Itti-gaafatamaan qorattoota gameeyyii dhaabbata kanaa—Doonaaraash Taakkuu, ibsa Raadiyoo Sgalee Ameerikaaf kennaniin, Itiyoophiyaa keessatti tajaajila interneetii argachuuf namni galii ji’a tokkotti argatu keessaa dhibba irraa harka didgama itti baasuu qaba – jehan.
Itiyoophiyaatti Korporeetii Komiyunikeeshinii Telekomiif hoji-geggeessaa ka tahan – Obbo Ambduraahimaan Mohammed immoo gama kaaniin, “ragaan qorannaa sana keessatti dhihaata karaa lamaan sirrii miti” jechuun falman.
Gabaasa guutuu kana cuqasuun dhaggeeffadhaa